Ndakayiswa nestepbrother yangu weekend yese! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakayiswa nestepbrother yangu weekend yese!
Ndakayiswa nestepbrother yangu weekend yese!
Ndaitarisa magaro a Tyler pese paafamba there was something about the way his shorts drooped a little, showing his boxer shorts ndaibva ndananzwa zemo even though ndaiziva kuti Tyler yainge iri step brother yangu. Apa ainge ane chest iya yekuti munhu ayenda kuGym ndaibva ndanzwa kuda kusvirwa but tainge tiri vana vadiki ipapo ndainge ndisingazive how to make a move. I don’t know that he knew how to make a move himself.
Tainge tiri mateenagers ipapo and baba vangu was getting married kuna mai vake saka that was the only thing keeping us apart nekuti tafunga kuti we were going to be brother and sister ipapo. Tyler was fifteen but ainge akareba kundipfuura, my type chaiyo, I had this thing for tall and short boys. Mumwe musi Tyler namai vake came for the weekend hanzi titange kuzivana and wake up in the same house, I had no problem nazvo coz I knew I was going to see Tyler again and this time in the next room. My dad’s bedroom was upstairs isusu our bedrooms ainge ari downstairs and next to each other saka ndaitonzwa all the movements ayiitwa naTyler.Ndaitotadza kurara knowing kuti ari pano and kumufunga kwandaiiyita zvaibva zvawedzera zemo, ndakanzwa door rake kuvhurwa kuma 10pm ndikabva ndati let me give him something chekuti arare achifunga.
Ndakaziva kuti ayitoyenda kubathroom chete ndokubva ndapfeka kanight dress kainge kachiwoneka mukati apa ndisina kana braaa nebhurugwa ndokubuda ndichiyenda kubathroom as if ndainge ndisingazive kuti kwayenda munhu. Ndakasvika ndichingovhura door ndikawona Tyler akabata mboro yake achiita weti, I was amazed nemboro yandikawona for a 15 year old ainge ane zimboro rakareba saiye plus kufuta. Inini I was 16 and ndainge ndanzwa nezemo I think yainge yavanguva yacho nekuti ndaiti even ndikawoma maromatic movie ndainzwa beche rangu richitota and daddy vangu was strict zvekuti ndaishaya kana mukomana wemuraini because vese vaitya my father. Tyler akacheuka achifunga kuti ndichabuda but ndakabva ndaramba ndakamira ndikati hapana chandisingazive pedza ndirikuda kuita weti. Akapedza ndokubva akubuda ndichibva ndamuti I can’t sleep kana usina hope you can come tiite nyaya hedu muroom mangu.
Tyler haana kupindura ndokubva ayenda, pandikadzokera kuroom kwangu ndakawana Tyler ari mubedroom mangu akarara pabed akapfeka kaboxer chete mboro yakamira kuti twii handi kufara kwandakaita ipapo. Ndakayenda pabed ndikabva ndangoti wow, didn’t expect this but I like it then I jumped pabed ndatobvisa night riya. Ndainge ndisati ndadya mboro but this was going to be my first time, ndaitedzera zvandakawona mupono imwe yandakabhobatwa nadaddy ndichiwona, ndakakwa Tyler akuchemerera so zvekuita kanoise ndichibva ndamuvhara muromo nepillow, ndakaramba ndichikoira mboro yaTyler nemuromo wangu kusvikira atunda, but shockly yamuka futi just after a few minutes. Tainge tiri mateenager saka hapana akafunga zvemacondom and tainge tisina anyway, Tyler akasimuka ndokubva ayita kumira achibva andidhonza kuuya pacorner yebed ndokusumudza makumbo angu mudenga pamashoulders ake.
Ndaiwona munhu achitarisa kupinda nekubuda kwaiyita mboro yake mubeche rangu ko ndainge ndatota zvekuti paiyita kutsvedza kunge padirwa johnsons baby oil saka mboro yake yakapinda ichimhanya. Ndaimutarisira pasi asi mukomana ayikoira mhani iyeye I am sure ainge asingade kuita disappoint, ndakakoirwa kani ndikatunda katwo chaiko ndipo paakazotundawo. Weekend iyoyo takasvirana every night because taiziva kuti next month our parents vainge vachiroorana and taibva tava brother and sister so tainge tisingade kubatwa or get used even though taiyita tichibatsirana kana pane ayita zemo.
Ndakayiswa nestepbrother yangu
Previous articleKana murume / mukadzi asingaguti pabonde, mhosva inani?
Next articleNdakaridza kamhere apa ichinyura yese zvisina tsitsi